कमरेड मनाङेलाई पखाला - परिहास - नेपाल
भर्खरकै कुरा हो, नयाँ माननीय कमरेड दीपक मनाङेलाई पखाला लागेछ । हिउँदे मौसम छ । लाग्नुपर्ने त रुघा हो । तर उनलाई रुघा नलागी पखाला लाग्यो ।
नयाँ माननीय, अचानक पखाला ! झटपट अस्पताल लगियो । डाक्टरले सोधे, ‘अचानक डायरिया कसरी भएछ ? अमिलो/पिरो केही खानुभएको थियो कि ?’
कमरेड मनाङेले केही सोचेर जवाफ दिए, ‘अहँ, त्यस्तो त केही खाएको छैन ।’
स्टुल टेस्ट गरियो । रिपोर्ट आयो– खानामा गडबडी ।
‘तपाईंले खानै नहुने कुरा खानुभयोजस्तो लाग्यो,’ डाक्टरले भने ।
कमरेड मनाङेले बिहान उठेदेखि बेलुका सुत्ने बेलासम्म खाएका सबै खानेकुरा सम्झे । तर त्यसमा ‘खानै नहुने’ केही परेजस्तो लागेन । अरु दिन जे खाने हो, त्यो दिन पनि त्यही खाएका थिए ।
डाक्टरले भने, ‘रिपोर्ट त अर्कै भन्छ । तपाईंले नियमित खानेभन्दा फरक वा नयाँ खालको कुनै चिज खानुभएको छ । तपाईंले जे खानुभएको हो, त्यो पचाउन सक्ने देखिँदैन । पचाउनै नसक्ने वस्तु त खान नहुने हो ।’
हत्तेरी ! के खाइयो त त्यस्तो पचाउनै नसक्ने कुरा ? कमरेड मनाङेले खुब सोचे । सोच्दासोच्दा झल्यास्स सम्झे– हिजो संसदीय कार्यालय गएर शपथ खाएको थिएँ ! हिजो दिनभरिमा खाएको नयाँ कुरा त्यही नै हो । पखाला त्यसैले लाग्या हो त ?
यो एउटा अनुमानित घटना मात्रै हो । आशा गरौँ, शपथग्रहणपछि कमरेड मनाङेउपर यस्तो कुनै घटना नहोस् !